Jose Mourinho Koobka Carabao Cup Ka Ciribtiray Chelsea,
Tababare Jose Mourinho ayaa markii ugu horeysay gacanta sarre ka helay tababare Frank Lampard iyadoo kooxdiisa Tottenham ay rigoore 5-4 ku garaacday kooxda Chelsea xilli 90kii daqiiqo ee ciyaarta la isku mari waayay barbaro 1-1 ah.
Chelsea ayaa hogaanka ciyaarta ku hormartay qeybtii hore iyadoo Timo Werner uu dhaliyay goolkiisii ugu horeysay ee Blues laakiin dhamaadkii ciyaarta waxaa Tottenham u barbareeyay Erik Lamela.
Tottenham ayaana u soo baxday wareega sideed dhamaadka Carabao Cup ka dib markii Mason Mount laga badbaadiyay rigooradii ugu danbeysay.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay iyadoo Chelsea ay iska maamuleysay, waxayna heystaan kubada boqolkiiba 75 tobankii daqiiqo ee ciyaarta ugu horeysay inkastoo aysan la dhaafin khadka dhexe, halka kooxda Jose Mourinho ay durbadii ay ciyaarta bilaabatay xirteen saf dheer oo daafac ah.
Fursadii ugu horeysay ee weyn ee ciyaarta waxay timid daqiiqadii 17aad markii Tanganga oo kulankii ugu horeysay xilli ciyaareedkan u dheelaya Spurs uu sibxaday taasoo u ogolaatay in baaska Mason Mount uu gaaro Hudson-Odoi laakiin darbadiisa waxaa badbaadiyay goolhaye Hugo Lloris.
Labo daqiiqo ka dib Chelsea ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana uu ahaa mid ay u qalmeen, iyadoo Timo Werner uu dhaliyay goolkiisii ugu horeysay ee isagoo xiran maaliyada Chelsea. Saxiixa cusub ee Tottenham Regiulon ayaa kubada dhiibtay iyadoo ay isku baaseen Hudson-Odoi iyo Azpilicueta ka hor inta uusan Azpilicueta kubada u dhigin Werner oo darbo kulul shabaqa dhex dhigay.
Daqiiqadii 23aad Tottenham ayaa heshay fursad ay ciyaarta ku barbareyn kartay iyadoo Gedson uu kubada la soo galay xerada ganaaxa, waxa uu isku dayay inuu garab maro Zouma laakiin daafaca Chelsea iyo goolhayaha cusub Mendy ayaa ka beeniyay fursadiisa dahabiga aheyd.
Mendy ayaa mar kale badbaadiyay Chelsea daqiiqadii 35aad isagoo darbo ka timid Lamela ku bixiyay cagtiisa midig ka hor inta uusan kubada uruursan. Waxaa lagu kala nastay 1-0 oo ay Chelsea ku hogaamineysay iyadoo qeybtii hore ay hareysay dagaal dhexmaray labada tababare ee macalinka iyo ardayga isku ahaa ee Jose Mourinho iyo Frank Lampard.
Mourinho ayaa ku eedeeyay Lampard uu ku digasho sameynayo madaama ay kooxdiisa hogaanka qabatay isagoo ku yiri Lampard: “F*cking hell, Frank, marka 3-0 lagaaga badinayo ma soo istaagtid halkaan”
Bilowgii qeybta labaad labo xiddig oo markii ugu horeysay u ciyaaraya labada kooxood ayaa awoodooda soo bandhigay, iyadoo saxiixa cusub ee Tottenham Riguilon uu darbo gool loo fishay ku tuuray goolka Chelsea laakiin waxaa u babac dhigay goolhayaha cusub ee Blues Mendy oo si fantastik ah u badbaadiyay.
Fursadii ugu horeysay ee ay Chelsea heshay qeybtii labaad ee ciyaarta waxay timid daqiiqadii 73aad markii Timo Werner ku qasbay Hugo Lloris uu badbaadin cajiib ah sameeyo.
Daqiiqadii 77aad Hudson-Odoi ayaa helay fursad uu ciyaarta ku dili karay laakiin waxa uu kubada dulmariyay goolka.
Tottenham ayaa goolka barbaraha heshay daqiiqadii 83aad ka dib qaab ciyaareed fiican oo ay soo bandhigeen qeybtii labaad ee ciyaarta. Saxiixooda cusub Reguilon ayaa shaqo fiican qabtay isagoo kubad dheer oo la soo qaaday hal taabasho ku koontaroolay, ka hor inta uusan taabashadiisa labaad ku garab marin Werner, isagoo kubada u dhiibay Lamela kaasoo hal taabasho sameeyay ka hor inta uusan dabamarinin goolhaye Mendy.
Goolkaas uu dhaliyay Erik Lamela ayaa ciyaarta u dirtay rigoore madaama 90ka daqiiqo lagu kala baxay barbaro gool iyo gool ah.
Tottenham waxaa rigoorooyinka u dhaliyay Eric Dier, Erik Lamela, Hojbjerg, Lucas Moura iyo Harry Kane
Chelsea waxaa rigoorooyinka u dhaliyay Tammy Abraham, Azpilicueta, Jorginho iyo Emerson halka Mason Mount laga qabtay rigooradii ugu danbeysay.
Tottenham ayaa rigoore 5-4 kaga badisay Chelsea iyagoo u soo gudbay wareega sideed dhamaadka ee Carabao Cup.
Zimbabwe’s minister accuses opposition to arms smuggling